NOSY MALAGASY : TSY TOKONY HO DISO FANDRAY FANAMPAHAN-KEVITRA NY MPITONDRA - Tout pour la restitution des îles malagasy
NOSY MALAGASY : TSY TOKONY HO DISO FANDRAY FANAMPAHAN-KEVITRA NY MPITONDRA
Publié le 20 Janvier 2016 par Jeannot Ramambazafy
Ambara amin’izao fotoana izao fa mila ampanginina ny fitakiana ireo Nosy malagasy ka tsy mila hampafatarina ny mpiray tanindrazana intsony ny tena zava-misy marina momban’ny « Iles Eparses » na ireo Nosy malagasy.
Ny fampahafantarana ny vahoaka malagasy sy izao tontolo izao ny tena marina momban’ny « îles éparses » sy ny fitakiana ireo Nosy malagasy ireo dia tsy misakana velively ireo sokajin’olona vitsy an’isa mivoy izany hevi-dravina izany hitondra ny raharaha eo anivon’ny Firenena Mikambana amin’ity taona ity, toy ny isan-taona nandritra ny taona maro. Tsy tokony ho diso fandray fanampahan-kevitra ny mpitondra satria mety ny fehin-kevitra tapaka eo amin’ny vahoaka malagasy sy ny vahoaka frantsay no ho entina eo anivon’ny Firenena Mikambana sisa amin’ity taona ity dia miravona ny raharaha ary miverina am-pilaminana amintsika malagasy ireo Nosy ireo.
Tsy vitan’ny « pétition » ny fitakiana ny « îles éparses » satria olona tsy voafidim-bahoaka no manao izany ka tsy manana ny lanjany eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Mamita-tena isika raha miditra amin’izany tetik’ady izany ary manoro vohona ny olona milaza fa « miasa ao anivon’ny y Firenena Mikambana » mitantara izany habobo izany. Fa rehefa miara-mientana ny vahoaka sy ireo Solombavam-bahoaka manerana an’i Madagasikara dia manana ny heriny izany eo anivon’izao tontolo izao. Tena fitakiana madio sy milamina izany ary tsy misy resaka « récupération politique » mihitsy.
TRATRY NY TSINDRY HAZO LENA NY MALAGASY
Tratry ny tsindry hazo lena isika nandritra ny 36 taona momban’ny resaka manodidina ireo Nosy malagasy ary nanomboka tamin’ny 29 mars 2014 dia niharan’ny tsy rariny ireo mpanjono mpiray tanindrazana amintsika ary tsy nohajain’ny fitondram-panjakana frantsay ireo « Résolutions adoptées par l’Assemblée Générale des Nations Unies et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer » ka tsy mahagaga raha miroso amin’ny fitakiana am-pilaminana ireo Nosy ireo ny vahoaka malagasy maro an’isa amin’izao fotoana izao satria very zo tanteraka i Madagasikara eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena
Efa nambaranay ombieny ombieny fa : « ny raharaha goavana toy itony eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena dia tafiditra amin’ny resaka « géopolitique » sy « géostratégique » ka matetika dia mety voalamina amin’ny fomba tsotra rehefa mifampiresaka ireo firenen-dehibe ary mahay mitaky am-pilamanina ny firenena voakasik’ilay tsindry hazo lena ». Izany no antony nametrahana ireo olona miandraikitra ny « lobbing international » miara-dia aminay eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena ary efa nahitam-bokany ny asan’izy ireo tato ho ato.
Ho fanamafisana izany ezaka nataon’izy ireo izany dia mila mampiseho fahavononana ny vahoaka malagasy maro an’isa amin’ny fitakiana ireo Nosy ireo miaraka amin’ny Solombavam-bahoakan’i Madagasikara amin’ny fiandohan’ity taona 2016 ity mba ho hitan’izao tontolo izao ny hetsika am-pilaminana hataon’ny vahoaka malagasy jiaby eo amin’ny Kianjaben’i Mahamasina.
Hiverina ny fiandrianam-pirenena (souveraineté nationale) satria hihofahofa any amin’ireo Nosy malagasy ireo amin’ity taona 2016 ity ny sainam-pirenena malagasy raha tsy diso fandray fanampahan-kevitra ny fitondram-panjakana malagasy.
Cercle de Réflexion pour l’Avenir de Madagascar (CRAM)
N.B. : Afaka manoratra amin’ny nosyantsika.malagasy@gmail.com izay olona mila fanazavana feno momban’ny « îles éparses ».